Khabiirka Kala Duwan: Muxuu yahay Macluumaad Miyaad u Baahan Tahay?
Haddii aad ku cusub tahay inaad raadiso suuq-geynta, waxaad u maleyneysaa in aad maqashay fekerkaaga " Nuxurka SEO "
Tilmaamahan hadda, oo ay bixiso Andrew Dyhan, Maamulaha Guusha Macaamiilka Semef , waxaa loogu talagalay inuu ka jawaabo saddex su'aalood:
1. Waa maxay raadinta mira dhalinta raadinta?
2. Waa maxay noocyadda raadinta mashiinka raadinta miyay jiraan?
3. Maxay tahay farsameynta naqshadeynta mashiinka raadinta?
Muxuu yahay mawduuca SEO? Muuqaal-dejinta shabakadda internetka waa arrimaha la sameeyey ujeedada ah in lagu wado gawaarida raadinta shabakadda - لنقل الأثاث.
Noocyo SEO ah
Muuqaal-dejinta web-ka-soo-saarka ayaa ku dari kara mid kasta oo ka mid ah kuwan soo socda:
Kuwani waa aasaas u ah shabakada internetka ee ganacsiga saldhig kasta.
Barta blogku waa mid ka mid ah hababka ugu yar ee dalbanaya si ay u sameeyaan hab dhaqan caadi ah oo ah naqshadda website-ka ee wax-qabadka kordhinta. Dhammaanba, qoraallada blogka ayaa ah kuwa soo jiidasho badan oo u jilicsan si ay u soo galaan ka mid ah boggaga sheyga, si ay u noqdaan hab aan caadi ahayn oo loo kobciyo qaar ka mid ah takhasusaha boggaaga.
Tani waa nooca ugu muhiimsan ee aad ka ogaaneyso wargeysyada badankood
Liisto runtii waa qeyb ka mid ah qodobka, oo wali qashqashaad ah sida foosha xumeeyaa waxay ka dhigeysaa mid aan u baahnayn in la baaro. Noocyada noocan oo kale ah waxay sidoo kale u muuqdaan inay noqdaan kuwo is-dhexgal ah marka laga helo qodobada su'aalaha ama goobaha shabakadaha internetka
Tilmaamuhu wuxuu ka kooban yahay waxyaabo dheeraad ah oo dheeraadka ah kaas oo si cad u muujinaya sida wax loo qabto.
Dhamaanba, waxaa jira fiidiyoow yar oo ku jira webka marka la barbardhigo boggaga content. Sidaa darteed, waxay noqon kartaa mid fudud oo lagu daro bogga koobaad ee loogu talagalay ereyga gardarrada ah isagoo samaynaya fiidiyow halkii uu ka maqan lahaa maqaal.
Tilmaamaha lagu dhisayo Mawduuca SEO
Fursada aad ku bixisay inaad ku soo gudbiso sheeko ku jirta hab aan taxaddar lahayn, kalsooni iyo ku-doodid in qaar ka mid ah jagooyinkaas dheer, waa fursad fiican oo lagu xirayo oo diiradda saaro naqshad dheeraad ah oo naqshadeynta website-ka
Halkan waa afar marxaladood oo lagu sifeynayo iyo dib-u-eegistaada raadinta mashiinka raadinta:
Ka fikir macaamiisha
Inay bartaan macaamiishaada - barnaamijka falanqayntaaga ayaa awood kuu siin kara inaad hesho qoto dheer oo macmiil ah. Tixgeli shaqaaleynta maamulayaasha kuwaas oo la hadli doona macaamiisha goobta kuugu fiican.
Samee kalandarka tifaftirka
Markaad aragtid cidda aad diirada saartid iyo sababta, waxaad bilaabi kartaa inaad sameysid kalandarka tifaftirka, kaas oo ka dhigan jadwal toos ah markaad u qaybinayso nuxur cusub iyo nooca arrinta noqon doonta.
Ka faa'iideysiga Google Calendar (aragti) - la wadaag jadwalka daabacaada kooxdaada oo dhan. Jadwal cusub oo loogu talagalay qoraaga, si ay u helaan ogaysiis marka taariikhda la filayo ay ku dhowdahay.
Falanqaynta iyo dib-u-qiimeynta
Waqtiga ugu dambeeya, sii wado falanqaynta website-kaaga. Si joogta ah u jajabiso waxyaabaha aad raadinayso mashiinka raadinta si aad u aragto waxa xaqa ah iyo waxa loo baahan yahay in wax laga qabto.
U diyaargarow guushaada si aad u noqotid meel aad ku kabsato farsamooyinkaas. Macaamiishaadu ma jeceshahay fiidiyoow Waqtigaa ka dhig fiidiyo badan!
U wakhti wakhti si loogu casriyeeyo loona hormariyo waxyaabo badan oo SEO ah.